Uyibeka kanjani i-watermark kwifoto ngefowuni kunye ne-PC, kwi-Emulator.online ▷ 🥇
Ukubeka i-watermark kwifoto yindlela yokudibanisa igama lakho okanye ishishini kumfanekiso. Okwangoku, kukho iinkqubo kunye nokusetyenziswa okukuvumela ukuba ufake uphawu lwakho, nokuba kukwifowuni yakho okanye kwiPC yakho, kumanyathelo ambalwa. Jonga indlela elula ngayo.
Ukufaka i-watermark kwifoto kwifowuni yakho, masisebenzise usetyenziso lwePicsArt. Ngaphandle kokukhululeka, ikuvumela ukuba usebenzise umfanekiso kunye nesicatshulwa, ngendlela ebhalwe igama lomntu. Ke ngoko, ngaphambi kokulandela inyathelo ngenyathelo, kufuneka ukhuphele usetyenziso kwifowuni yakho ye-Android okanye ye-iPhone.
1. Vula i-PicsArt kwaye wenze iakhawunti okanye ungene ngedatha yakho ye-Gmail okanye ye-Facebook;
Ukuba kunokwenzeka ubone isiphakamiso sokubhalisela usetyenziso, cofa i X, ihlala ibekwe phezulu kwesikrini ukuvala intengiso. Ukhetho lokufaka i-watermark luyafumaneka kwizibonelelo zoncedo zasimahla.
2. Kwiskrini sasekhaya, chukumisa + ukuqala;
3. Chukumisa ifoto apho ufuna ukufaka khona i-watermark ukuyikhetha. Ukuba awuyiboni, yiya ku Zonke iifoto ukujonga zonke iifoto ezikhoyo kwisixhobo sakho;
4. Tsala ibar yesixhobo emazantsi omfanekiso ukuze ubone yonke imisebenzi. Ndachukumisa Umbhalo;
5. Emva koko bhala igama lakho okanye lenkampani yakho. Chukumisa i icon yokukhangela (✔) xa ugqibile;
6. Ngaphambi kokuba uqale ukuhlela, beka isicatshulwa kwindawo oyifunayo. Ukwenza oku, chukumisa kwaye urhuqe ibhokisi yokubhaliweyo.
Kuyenzeka ukuba wandise okanye unciphise ibhokisi yokubhaliweyo kwaye, ngenxa yoko, ileta, ngokuchukumisa kunye nokutsala kwizangqa ezivela kwimiphetho yayo;
7. Ngoku, kuya kufuneka usebenzise izixhobo zokuhlela isicatshulwa ukushiya i-watermark njengoko ukhetha. Ezi zixhobo zilandelayo ziyafumaneka:
Fuente: Unikezela ngeendlela ezahlukeneyo zoonobumba. Xa uchukumisa nayiphi na, isetyenziselwa isicatshulwa esifakwe kwifoto;
KorNjengoko igama lisitsho, likuvumela ukuba utshintshe umbala wonobumba. Jonga ukuba kungekudala, kusekho ukhetho lokubandakanya i-gradient kunye nobume;
Umda: ikuvumela ukuba ufake umda kwileta kwaye ukhethe ubukhulu bayo (kwibar Isixa);
Amathuba: Guqula ukubonakala kokubhaliweyo. Eli luphawu olubalulekileyo ukuze i-watermark ifakwe ngendlela efihlakeleyo, ngaphandle kokuphazamisa umbono wesithombe;
SombraUmsebenzi wokufaka unobumba Ivumela ukukhetha umbala wokufiphaza, kunye nokulungelelanisa ubungqongqo kunye nendawo;
Ku lungile: ufaka ukugoba kwigama okanye ibinzana, ngokwe-engile echazwe kwibar Ukusonga. Kuxhomekeka kuhlobo lweshishini onalo, unganikeza uphawu lwakho ngokukhululeka.
8. Emva kokuhlela, yiya kwi icon yokukhangela (✔) kwikona ephezulu ngasekunene kwesikrini;
9. Ukugcina iziphumo, thepha i-icon yekona kwikona ephezulu ngasekunene
10. Kwiskrini esilandelayo, yiya ku Gcina kwaye emva koko Gcina kwisixhobo sakho. Umfanekiso uya kugcinwa kwigalari okanye kwiThala leeNcwadi le-smartphone yakho.
Faka umfanekiso njenge-watermark
I-PicsArt ikwavumela ukuba ufake i-icon yenkampani yakho endaweni yokuchwetheza igama lebhrendi yakho. Ukwenza oku, kufuneka kuqala ube nomfanekiso we logo kwiJPG igalari o Biblioteca unomyayi.
Ke landela amanyathelo 1 ukuya ku-3, iboniswe ngasentla. Emva koko, kwitreyi yesixhobo, cofa A. Ifoto. Khetha ifayile oyifunayo kwaye uqinisekise nge Yongeza.
Njengombhalo, unokuhlengahlengisa indawo kunye nobukhulu bomfanekiso ofakiweyo ngokuthepha kunye nokutsala. Ukuphinda wenze ubungakanani kwakhona ngelixa ugcina ubungakanani, sicebisa ukuba ukhethe i-icon enentloko ephindwe kabini.
Beka i-logo, yiya kukhetho Amathuba, Efumaneka ezantsi kwesikrini. Nciphise ukuze ibonakale ukuze ingaphazamisi owona mfanekiso uphambili, kodwa isabonakala. Gcwalisa inkqubo kunye ne-icon yokuqinisekisa (✔) phezulu kwesikrini ngasekunene.
Ukugcina iziphumo, cofa i icon yotolo kwikona ephezulu ngasekunene nakwisikrini esilandelayo uye kuyo Gcina. Qinisekisa isigqibo kwi Gcina kwisixhobo sakho.
Kwisifundo esilandelayo, siya kusebenzisa iwebhusayithi yeLoveIMG. Inkonzo ivumela ukufaka ii-watermark kwimifanekiso nakwimibhalo, kunye nokwenza ubungakanani kunye nokukhanya. Umsebenzisi unokubeka uphawu ngokulula kwiifoto ezininzi ngaxeshanye.
1. Vula isikhangeli osikhethileyo kwaye ungene kwiLoveIMG isixhobo sewermark;
2. Cofa kwiqhosha Khetha imifanekiso kwaye ukhethe umfanekiso ofuna ukufaka kuwo i-watermark kwikhompyuter yakho;
3. Inkqubo yokufaka ii-watermark kwimifanekiso kunye nokubhaliweyo kuyafana:
A) Kumfanekiso: ukuba ufuna ukufaka umfanekiso onjenge logo yenkampani yakho, cofa Yongeza umfanekiso. Emva koko ukhethe umfanekiso kwi-PC yakho.
ISIBINI) Isicatshulwa: Cofa apha Yongeza isicatshulwa. Bhala isicatshulwa osifunayo, njengegama lakho okanye uphawu lwakho. Unokwenza ngokwezi zinto zilandelayo:
Fuente-Ukucofa iArial ibonisa ezinye iindlela;
Talla: iyafumaneka kwi icon enonobumba ababini T (Tt);
Uhloboifonti enesibindi (sibini), akekeliswe (yokunye nokukrwela umgca ngaphantsi (U);
Umbala ongemva: ngokucofa kwi icon yebhakethi yepeyinti
Umbala weleta kunye nentsalela: ifumaneka ngokunqakraza uphawu lweleta UN
Ukufomathakwi icon eyenziwe yimigca emithathu, kunokwenzeka ukuba ubeke okanye ukuxhasa isicatshulwa.
4. Emva koko beka umfanekiso okanye ibhokisi yokubhaliweyo kwindawo oyifunayo ngokuchofoza kunye nokutsala. Ukwenza ubungakanani kwakhona, nqakraza ngokulula kwizangqa emaphethelweni kwaye urhuqe;
5. Ukulungelelanisa i-opacity, cofa i icon yesikwere kunye nezikwere ngaphakathi. Ibha iya kuvela apho unganyusa okanye unciphise inqanaba lokuqaqamba;
6. Ukuba ufuna ukufaka i-watermark efanayo kwenye imifanekiso, cofa indawo +, kwicala lasekunene lesithombe. Emva koko ukhethe eminye imifanekiso kwiPC yakho;
Ungacofa nganye nganye ukuze ubone ukuba iapp izakubukeka njani kwaye uhlengahlengise ngokukodwa, ukuba kukho imfuneko.
7. Cofa kwiqhosha Imifanekiso yeWatermark;
8. Khuphela ifayile kwi Khuphela imifanekiso ebonisiweyo. Ukuba ufake i-watermark kwimifanekiso emininzi ngaxeshanye, ziya kukhutshelwa kwifayile ekwifomathi ye.zip.
Ukuba ufuna ukusebenza ngaphandle kweintanethi kwaye awukulungelanga ukuhlawula isicelo sokuhlela, ungasebenzisa iPeyinti 3D. Inkqubo ivela kwiWindows 10. Ukuba unale nguqulo yale nkqubo efakwe kwikhompyuter yakho, unaso nesoftware.
Ngokungafaniyo nokukhethwa kwangaphambili, akunakwenzeka ukuba utshintshe i-opacity. Ke ukuba ufuna iziphumo ezifihlakeleyo, kungangcono usebenzise ezinye zezisombululo eziboniswe apha ngasentla.
1. Vula iPeyinti 3D;
2. Cofa apha Imenyu;
3. Emva koko yiya ku Faka kwaye ukhethe ifoto apho ufuna ukubeka khona i-watermark;
4. Ngomfanekiso ovulekileyo kwinkqubo, cofa Umbhalo;
5. Cofa kwifoto uze ufake isicatshulwa se-watermark. Kwikona esekunene kwesikrini, uya kubona ukhetho olukhoyo ekusebenzeni kokubhaliweyo. Ukuzisebenzisa, khetha kuqala isicatshulwa kunye nemouse.
Umbhalo we3D okanye 2D-Uya kwenza umahluko kuphela ukuba uza kusebenzisa i-3D View okanye umsebenzi oyiNtloko oxubeneyo;
Uhlobo lwamagama, ubungakanani kunye nombala;
Uhlobo lokubhaliweyo: isibindi (N), akekeliswe (yokunye nokukrwela umgca ngaphantsi (S)
Ukuzaliswa kwemvelaphi-Ukuba ufuna isicatshulwa sibe nemvelaphi enemibala. Kule meko, kuya kufuneka ukhethe umthunzi ofunekayo kwibhokisi esecaleni kwawo.
6. Ukubeka isicatshulwa apho ufuna khona, cofa uze utsale ibhokisi. Ukwenza ubungakanani kwakhona kwibhokisi yokubhaliweyo, cofa kwaye urhuqe izikwere ezikumda;
7. Xa ucofa ngaphandle kwebhokisi yokubhaliweyo okanye ucofe iqhosha lokungena, isicatshulwa silungisiwe apho sifakwe khona kwaye asinakuba sahlelwa;
8. Ukuqukumbela, landela umendo: Imenyu → Gcina njenge → Umfanekiso. Khetha indlela ofuna ukugcina ngayo nokuphela kwayo Gcina.
Ukuba ufuna ukusebenzisa uphawu lwenkampani yakho, yenza nje amanyathelo 1, 2 no-3 kwaye uphinde uphinde uphinde, kodwa ngeli xesha, uvula umfanekiso we logo. Emva koko yenza nje uhlengahlengiso oluboniswe kwifayile ye- Inyathelo 6 kwaye ugcine, njengoko kubonisiwe kwi Inyathelo 8.
Uyenza njani iiletahedi kwiLizwi
Abahleli bevidiyo besimahla abafanelekileyo kwizixhobo eziphathwayo
'I-Photoshop' ekwi-Intanethi: Eyona ndlela ilunge ngakumbi yokuHlela iifoto